ရည်းစားဟောင်း Demi Lovato ကို အားပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ Joe Jonas
ရည်းစားဟောင်း Demi Lovato ရဲ့ သတင်းအပေါ် အားပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ Joe Jonas
25 Jul 2018 . 1:01 PM
Demi Lovato ဆေးလွန်ပြီး ဆေးရုံရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြားတာနဲ့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်တဲ့ Joe Jonas ဟာ “Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi” ဆိုပြီး Twitter မှာ အားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
Demi Lovato နဲ့ Joe Jonas
သူ့ရဲ့ ဒီလို Tweet လုပ်ပြီး တင်ထားတဲ့ စာသားဟာ ဆေးရုံမှာ Demi Lovato တစ်ယောက် သတိမေ့နေတဲ့ အခြေအနေမှာ တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Demi ဟာ သတိပြန်လည်လာပြီး မိသားစုနဲ့ အတူရှိနေပါတယ်။ ကြားရတဲ့ သတင်းတွေအရတော့ Demi Lovato ဟာ ဟီးရိုးအင်းလို့ ခေါ်တဲ့ ဘိန်းဖြူလွန်သွားတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
Demi Lovato တစ်ယောက် အရက်နဲ့ ကိုကိန်းစတဲ့ အရာတွေကို ဘာဆိုဘာမှ မသုံးဘဲ ဖြတ်ထားတာ ၆ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်က ထွက်ရှိထားတဲ့ “Sober” ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာတော့ သူဒီအရာတွေကို ပြန်သုံးနေပြီလို့ ထုတ်ဖော်ထားပါတယ်။
အစ်ကိုတော် Joe Jonas လိုပဲ ညီငယ် Nick Jonas ကလည်း “Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She isafighter. #prayfordemi” ဆိုပြီး Twitter မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ရညျးစားဟောငျး Demi Lovato ရဲ့ သတငျးအပျေါ အားပေးစကားပွောလိုကျတဲ့ Joe Jonas
Demi Lovato ဆေးလှနျပွီး ဆေးရုံရောကျသှားတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ကွားတာနဲ့ ရညျးစားဟောငျးဖွဈတဲ့ Joe Jonas ဟာ “Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi” ဆိုပွီး Twitter မှာ အားပေးစကားပွောခဲ့ပါတယျ။
Demi Lovato နဲ့ Joe Jonas
သူ့ရဲ့ ဒီလို Tweet လုပျပွီး တငျထားတဲ့ စာသားဟာ ဆေးရုံမှာ Demi Lovato တဈယောကျ သတိမနေ့တေဲ့ အခွအေနမှော တငျထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ Demi ဟာ သတိပွနျလညျလာပွီး မိသားစုနဲ့ အတူရှိနပေါတယျ။ ကွားရတဲ့ သတငျးတှအေရတော့ Demi Lovato ဟာ ဟီးရိုးအငျးလို့ ချေါတဲ့ ဘိနျးဖွူလှနျသှားတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
Demi Lovato တဈယောကျ အရကျနဲ့ ကိုကိနျးစတဲ့ အရာတှကေို ဘာဆိုဘာမှ မသုံးဘဲ ဖွတျထားတာ ၆ နှဈလောကျရှိပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ သိပျမကွာခငျက ထှကျရှိထားတဲ့ “Sober” ဆိုတဲ့ သီခငျြးမှာတော့ သူဒီအရာတှကေို ပွနျသုံးနပွေီလို့ ထုတျဖျောထားပါတယျ။
အဈကိုတျော Joe Jonas လိုပဲ ညီငယျ Nick Jonas ကလညျး “Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She isafighter. #prayfordemi” ဆိုပွီး Twitter မှာ တငျခဲ့ပါတယျ။